Vaovao - Ahoana no hisafidianana ny solo-jaza?
Ao anatin'ny dingana tsotra 4 dia mampianara anao hisafidy famafana azo antoka!
1: Jereo ireo fangaro sy fonosana.
Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mividy famaohana lena ny zazakely amin'ny fantsona mahazatra, ary tsy maintsy mijery azy ireo tsara izy rehefa misafidy:
Ho an'ny akora vokatra, tsara kokoa ny misafidy ireo vokatra izay misy marika mazava tsara fa tsy misy akora tsy azo antoka toy ny alikaola, ny tsiro ary ny fluorescent agents.
Ho an'ny fonosana vokatra sy boky torolàlana, safidio ny vokatra avy amin'ny mpanamboatra mahazatra izay manana adiresy momba ny ozinina, nomeraon-telefaona, fenitra fanadiovana, fenitra fampiharana ary lisansa fanadiovana mifandraika amin'izany avy amin'ny sampana fahasalamana.
2: maimbo ny fofona.
Miezaha tsy mifidy famafana zaza izay misy fofona mahery na fofona manitra toy ny alikaola.
F: Anontanio ny zavatra niainana sy ny fangaro.
Ny fanosorana lena lena tsara dia tsy hiteraka fahasosorana amin'ny hoditra toy ny mena, ny fivontosana ary ny fikolokoloana. Raha vantany vao miseho ireo soritr'aretina ireo dia asaina mijanona tsy hampiasa azy io avy hatrany.
Rehefa mividy na manova ny marika soloina lena amin'ny voalohany dia azonao atao ny manontany bebe kokoa momba ny traikefa amin'ny fampiasana ireo reny manodidina anao, ary koa manatona ny mpanampy amin'ny fivarotana na ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
3: Kitiho ny fitaovana.
Safidio ny solo-jaza amin'ny fitaovana malefaka fa tsy mora volon-koditra, mba hilamin-tsaina ny zavatra niainan'ilay zaza;
Mandritra izany fotoana izany, ny famaohana lena miaraka amin'ny akora somary tsotra dia tokony tsy mifikitra sy tsy matavy rehefa mamafa eo an-tananao. Raha rahona sy viscous ilay rano voahidy, dia mety ho be loatra ny fanampiny nampiana.
Ny hoditry ny zaza dia marefo sy mora tohina kokoa. Raha ilaina dia azon'ny ray aman-dreny atao ny mividy azy io ary manandrana izany alohan'ny hanapahany hevitra.
Ny fangaro rehetra dia voamariky ny fonosana, tsy misy preservatives simika, ary ampiasaina daholo ny raikipohy zavamaniry.
Na dia tsy ilaina aza ny manisy marika ny akora rehetra amin'ny fonosana solo-jaza any Shina, any Eropa, Taiwan, China ary ny toerana hafa, ny tavy mando dia an'ny fitantanana ny vokatra fikolokoloana hoditra, ary tsy maintsy asiana marika ireo akora rehetra.
Ny famafana mando Pei'ai dia mitaky fenitra avo lenta sy fepetra henjana ho an'ny tenany, marika ny fangaro rehetra, manaja ny zon'ny mpanjifa hahalala, mba hahafahan'ny reny tsirairay misafidy sy mampiasa azy ireo am-pitoniana kokoa.